Ukuphelelwa Ngama-Malware Ukuhlaselwa? - U-Semalt uyaza!
U-Lisa Mitchell, i-8 (Semalt iMenenja yeNtuthuko Yomthengi, uxwayisa ukuthi kuyadingeka njalo ukugwema amawebhusayithi nezinhlelo ezithile uma usebenzisa i-intanethi. Lokhu kungenxa yokuthi amanye amawebhusayithi nezinhlelo ziqukethe i-malware, i-Trojan, ne-virus ezithinta kabi ukusebenza komshini. Ukwengeza, izinhlelo eziyingozi namawebhusayithi anganciphisa amacala okuba ukwehliswa kobugebengu nokuhlaselwa kwezezimali.
Kukhona izinga eliphezulu lokusakazeka kwezinhlelo ezinonya eziku-intanethi. Lezi zinhlelo zifaka phakathi i-malware, isofthiwe yokuthengisa, nemilayezo yesikhangiso. Ingxoxo inikeza uhlu lwezinhlelo ezahlukene namawebhsayithi angabangela ingozi kumsebenzisi we-intanethi. Kubalulekile ukuthi umsebenzisi aqonde ukuthi amawebhusayithi kanye nezinhlelo zekhompiyutha zezinkampani ezihloniphekile nazo zingase zithatheleleke ngezinhlelo ezinonya. Lokhu kungakhathaliseki ukuthi abasebenzi bezoLwazi lwezoLwazi basebenzisa umzamo omkhulu kanye nezinsiza ekulawuleni izinhlelo kanye namawebhusayithi enkampanini. Uhlu alukho olunzulu ngoba alukwazi ukuqinisekisa ukuthi umsebenzisi we-intanethi ngeke ahlangane namacala we-malware, iTrojan, noma igciwane uma upheqa i-inthanethi.
Kukhona amasu okuphepha wekhompiyutha abasebenzisi abangayibona lapho bephequlula iwebhu. Isibonelo, umsebenzisi kufanele afinyelele amasayithi e-intanethi esebenzisa i-akhawunti engeyona yokuphatha. Ulwazi olungaphezulu mayelana nokuphepha kwekhompyutha lungatholakala kwiwebhusayithi elandelayo: it.unh..edu / ama-bestpractices. Ukwengeza, umsebenzisi angakwazi ukuthola ulwazi lwezokuphepha kwekhompyutha kusukela ochwepheshe bezobuchwepheshe be-Information or uMnyango wezoLwazi lwezoLwazi.
Uhlu lweZwebhusayithi eziyingozi:
Amawebhusayithi ahlinzeka ngezinsiza zamahhala
Izingosi zokuzijabulisa zamahhala ezihlinzeka ngamasevisi aphikisiwe, ividiyo, noma izinhlelo zokulanda software. Isibonelo sesayithi lokulanda lokuzilibazisa yamahhala "Warez."
Amanothi aphakathi kwamanye amazwe (ama-P2P)
Izinjini ezicashile. Abasebenzisi be-intanethi bayelulekwa ukusebenzisa izinjini ezivamile ezifana ne-Bing, Google, ne-Yahoo.
Amawebhusayithi adinga ukulanda noma ukufakwa ukuze avumele ukufinyelela
Imidlalo ye-Java e-intanethi, noma i-Flash based based
Ikhuphoni nezitolo zebhizinisi
Amasayithi wesithathu ahlinzeka ngamasevisi ngemali. Lezi zinsizakalo zinikezwa inkampani yokuqala ngaphandle kwezindleko. Izibonelo zamawebhusayithi wesithathu asolisayo kufaka phakathi amawebhusayithi okubika ngesikweletu, imininingwane yolwazi yomphakathi, ulwazi lokuhamba, namamephu amamephu.
Ukusesha Abantu Abantu Abakhululekile
Abasebenzisi be-intanethi kufanele bagweme amawebhusayithi anika amasevisi wokulanda mahhala. Lokhu kungenxa yokuthi amanye amafayela noma izinhlelo zokusebenza kulezi zamasayithi zihlanganiswe nesofthiwe engathandeki, i-malware, iTrojan, noma igciwane.
Ikhwalithi yesofthiwe enonya ayilungile, futhi lokhu kungabangela ikhompyutha ukuba ihlangabezane nezinkinga ze-software ne-hardware. Ukwengeza, i-malware ehlanganisiwe ingathinta kabi umsebenzisi wekhompyutha ngokuba idatha noma ukubhubhisa amafayela abalulekile. Izingosi zokulanda isofthiwe okufanele zigweme zihlanganisa:
Amaphephadonga enembile noma e-othomathikhi
"Okukhethekile" noma iminikelo yamahhala
Ukuzijabulisa okulandwayo kumculo, amavidiyo, noma imidlalo
Unqulo wesi arab wokukhohlisa noma izinhlelo zokuphepha kwe-intanethi
Amakhadi e-Electronic (28)
Izithombe ezidumile zeDeskithophu
Ama-Generator Key Key
Izilungiselelo Zosesho Zokusesha
Umsebenzisi we-intanethi kufanele alande kuphela izinhlelo zekhompyutha ezivela kumawebhusayithi ahloniphekile. Abasebenzisi kufanele futhi baqinisekise ukuthi ikhompyutha inezinhlelo zokuphepha ezihleliwe nezinsuku ezivikela ikhompyutha kusuka ku-malware, iTrojan, noma ukuhlasela kwegciwane.